नयाँ अध्याय शुरु : सम्पादकीय -
२०७७, ३१ भाद्र बुधबार २०:२९
केही कुरा शुरु गर्न सजिलो हुन्छ तर त्यसलाई टिकाई राख्न बहुत कठिन हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण ‘पूर्वेली साप्ताहिक’ हो । निष्ठाका साथ जिम्मेवार ढंगबाट तल्लिन भई केही कुरा सुरु गरियो भने त्यो सदैव टिकिरहन्छ भन्ने उदाहरण पनि ‘पूर्वेली साप्ताहिक’ नै हो । पूर्वेली साप्ताहिक अनेकन परिस्थितिसँग सन्तुतिल र पूर्ण जिम्मेवार ढंगले जुभ्mदै अघि बढेको पाँचौं वर्ष पूरा भएर छैटौं वर्षमा लाग्यो।
मिसन पत्रकारितालाई शिरोधार्य गरेर अघि बढ्दा अनेकन समस्या जुन क्षेत्रमा पनि आउँछन् । त्यस्ता समस्या पूर्वेलीले पनि अनुभव ग¥यो । आर्थिक संकटको सामना शुरुवाती दिनहरु देखि नै थिए । पत्रकार, कर्मचारीको सेवा सुविधा, पत्रिका छपाई, वितरणमा कैयन पटक आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको अवस्था छैटौं वार्षिकोत्सवको उल्लासले सामान्य लागेपनि परिस्थिति कहाली लाग्दो नै थियो । अहिलेको अवस्था पनि पूर्ण सहज पक्कै छैन । तर पनि जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा पूर्वेली साप्ताहिक कहिल्यै बिचलित भएन ।
पानीका फोका जस्ता खोल्ने र बन्द हुने धेरै सञ्चारमाध्यमका बीच एउटा नविनतम उदाहरण बनिरह्यो पूर्वेली साप्ताहिक । निरन्तर निष्पक्ष ढंगबाट कलम चलिरहने कुरामा पूर्वेली पूर्ण प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धता पाठक, विज्ञापन दाता, सहयोग सद्भाव राख्नुहुने सबैको हौसलाले नै प्राप्त भएको हो । नेपाली पत्रकारिता अझै पूर्ण व्यवसायिक बन्न सकेको छैन त्यसमा पनि मोफसलका सञ्चारमाध्यम अभावबीचमै सञ्चालन भईरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेकै आर्थिक स्रोत रहेछ । कहिल्यै नेपाली सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपले पूर्ण रुपमा सक्षम बनेका छैनन् । तर पस्किने खुराकहरु सुविधा सम्पन्न छन् ।
नेपाली सञ्चार संस्था कसैका खोजीले चल्ने गरेको, प्रभावमा पर्ने गरेको सुन्ने गरिएको छ । जुन गलत हो । हामी दवाव, प्रभाव र मोहले होइन निष्पक्ष ढंगबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको धर्म र मर्म अनुरुप चल्ने कुरामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं । हाम्रा लागि छैटौं वर्ष नयाँ अध्याय हो । नयाँ अध्याय थप स्वर्गिम बनाउन कम्मर कसेर लाग्नेछौं ।
Previous articleपाठकको सद्भावले हामी उत्साहित छौं, जनचासोका विषयवस्तु अझ बढी पस्कने बाचा गछौं
Next articleबुद्धशान्तिको ‘एक्टा डिना’ पूर्वेली साप्ताहिक
Hey Buddy!, I found this information for you: "नयाँ अध्याय शुरु : सम्पादकीय". Here is the website link: https://epurbeli.com/archives/2609. Thank you
सहयाेग र सेवाले जीवनमा ठूलाे आनन्द मिल्छ
दृष्टिकोण २०७७, ३१ भाद्र बुधबार २०:२९